ယီမင်နိုင်ငံတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား၊ ၂၃၄ ဦး သေဆုံး ၊ ၄ဝဝ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ - Yangon Media Group
ယီမင်နိုင်ငံတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား၊ ၂၃၄ ဦး သေဆုံး ၊ ၄ဝဝ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ
ယီမင်နိုင်ငံမြို့တော် ဆာနာတွင် ရက်သတ္တပတ်ကြာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူပေါင်း ၂၃၄ဦး သေဆုံး၍ ၄ဝဝခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၃၈၃ ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီကော်မတီ(ICRC) က ပြောကြားခဲ့သည်။ ICRC က ဆာနာမြို့ရှိ ဆေးရုံများသို့ ဆေးဝါးများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့် လောင်စာဆီများကို တတ်အားသမျှ ပေးပို့ဖြည့်ဆည်းနေကြောင်း ICRC ဒေသတွင်းဒါရိုက်တာ ရောဘတ်မာဒီနီက သူ၏တွစ်တာမှနေ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့က ဟူသီတိုက်ခိုက်ရေးသမားတို့က ယီမင်သမ္မတဟောင်း အလီအဗ္ဗဒူလာဆာလက်နှင့် ၎င်း၏ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ထိပ်တန်းလက်ထောက်အရာရှိတို့အား သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် ဆာနာမြို့ရှိ ဆာလက်၏ သစ္စာရှိလက်နက်ကိုင်အုပ်စုနှင့် ဟူသီတို့အကြားတွင် သုံးရက်ကြာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဆာလက်သစ္စာခံတို့က ဆာနာမြို့လယ်ရှိ ဆာဘင်းရင်ပြင်တွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပနေသည့်အနီးတွင် လုံခြုံရေးအတွက် ဆာလက် စီမံဆောင်ရွက်နေသော ဗလီအတွင်းသို့ ဟူသီများ ဝင်ရောက် ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ပဋိပက္ခစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆာလက်သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီးနောက် ဆာနာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများ ရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Ref: BBC, Xinhua
ကမ္ဘာ့ဖလား မဲခွဲပွဲနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပွဲစဉ်များ
အက်ဖ်အေဖလား တတိယအဆင့် ပွဲစဉ်များ ထွက်ပေါ် ၊ လီဗာပူး-အဲဗာတန်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံလျက်ရှိ
မင်းသမီး ယွန်နာပါဝင်ထားသည့် “E.X.I.T “ရုပ်ရှင် ရုံတင်ပြီး ၄ ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူ နှစ်သန်းကျော်ရှိ
လာဘ်စားမှုဖြင့် တောင်ငူခရိုင် ဥပဒေအရာရှိနှင့် ရဲအုပ်တို့ကို အမှုဖွင့် အရေးယူ
လောကနန္ဒာ စွယ်တော်မြတ်စေတီ၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတော်တွင် တစ်မူ ထူးခြားစေရန် ပထမအကြိမ် လှေလှော်ပြ??
ကော့ကရိတ်-မြဝတီ အမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်တစ်စီး ရပ်ထားသည့် ယာဉ်ကို အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တိုက်မိရာ??
ပြည်တွင်းပြည်ပ အမြန်ချောပို့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ကိုးခုကို ထပ်မံ လုပ်ကိုင?